एकांकी ०४ - आधा मेरोः आधा तिम्रो | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 02/20/2009 - 21:42
लक्ष्मी: एक अधबैँसे युवती
नरनाथ: एक अधबैँसे युवक
रञ्जना: एक ठिटी
पुष्पकमल: एक बालक
नरनाथ:- (झोला राख्दै र लक्ष्मीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै) आउँदाआउँदै ढिलो भइगो, साथीहरूले घेरी हाले ।
रञ्जना:- (मामा नरनाथतर्फ फर्केर) हिजो तपाईंले बिहान सबेरै खाना तयार पार्नु भन्नुभएको थियो नि । माइजूले हतारहतारमा खाना तयार गर्नुभएको छ । खाना खान बस्नुभए हुन्थ्यो ।
नरनाथ:- हुन्छ, हुन्छ भाञ्जी, तिमी चाहिँ खाना खाइहाल र फटाफट स्कुल गइहाल ।
रञ्जना:- (मुस्कुराउँदै) हुन्छ, हुन्छ मामा, म कपाकप भात खान्छु र फटाफट स्कुल जान्छु ।
नरनाथ:- (हाँस्दै) अनि स्कुल पुगेर थ्याच्च बेञ्चमा बस्नु तर साथीलाई प्याच्च केही पनि नभन्नु नि । (ऊ हाँस्दै झोला लिएर स्कुलतर्फ हिँड्छे ।)
लक्ष्मी:- (छोरातर्फ हेर्दै) जाऊ नानी, बाबालाई खाना खान बस्नुस् भन ।
नरनाथ:- छोरो बाबालाई बोलाउन सक्ने भा'को छैन । आमा, छोराले खाना खाए भयो । मैले साथीहरूसँगै होटलमा खाएँ । मलाई पर्खनु परेन ।
लक्ष्मी:- आमा, नाम मात्रकी आमाले के गर्न सक्छे र ? फेरि तपाईंको संविधानमा छोरो आमाको पनि हुन्छ र ?
नरनाथ:- नानाथरीको अड्को थापेर कुरो नलम्ब्याऊ है । भेटिएका साथीहरूसँग एक क्षण गफिँदा के अनिष्ट भो त ? ढिलो भए पनि बरालिएको त हैन नि ।
लक्ष्मी:- (केही रिसाउँदै) मेरा इच्छा आकाङ्क्षालाई बुझिदिनुस् भनेर निवेदन गर्दा मेरो के गल्ती भो ? छोरालाई हर्लिक्स ल्याइदिनुस्भन्दा मेरो के अपराध भो ? चाहिँदा काम कुरा चाहिँ एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँने र नचाहिँदा काम कुरामा चाहिँ सामलखाजा लिएर लागि पर्ने श्रीमान्लाई श्रीमतीले केही भन्न नपाउने ?
नरनाथ:- रिसाए कसको अनुहार अँध्यारो हुन्छ र ?
लक्ष्मी:- उज्यालो अनुहार लगाउन त तपाईँले कहिले दिनुभएको छ र ?
नरनाथ:- जहिले पनि 'के निउँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ' जस्तो नगर न । श्रीमान्सँग जोरी खोज्नुहुन्न क्या ।
लक्ष्मी:- (अँझ रिसाउँदै) म तपाईंकी को हुँ र, तपाईंसँग जोरी खोज्नु । सानो प्रस्ताव के राखेकी थिएँ, मलाई त परपरै राख्नु भो है ।
नरनाथ:- तिम्रो नचाहिँदो प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र ? गनगन गर्ने यी आइमाईहरूको बानी नै खराब । चाहिँदो कुरामा त ठीकै छ । नचाहिँदो काम कुरामा पनि बडो गनगन । कहिलेकाहीँ यिनेरूले श्रीमान्को कोर्रा त खानैपर्ने हो ।
लक्ष्मी:- (क्रोधी भएर) तपाईं र तपाईंको समाजकै बानी राम्रो । नारीलाई पैतालामुनिको धूलो सम्झने तपाईंकै समाजको परिपाटी राम्रो । समाजको कुसंस्कारी रीतिथितिलाई मलजल दिने तपाईंकै चालामाला नै असल । समय जति छिप्पिए पनि नारीलाई हेर्ने तपाईंका दरिद्र आँखा नै असल । अनेकन् परिवर्तनका बाबजुत पनि तपाईंको पुरातनवादी सामन्ती सोच नै सर्वत्र जाति नै जाति ।
नरनाथ:- (क्रोधी हुँदै) ऐ तँ निकै बाठी हुँदै छेस् । तँ हरतरहले लक्ष्मण रेखा नाघ्दै छेस् । तैँले उत्पात मच्चाउन मिल्दैन । मेरा लागि तँ को र के होस् भन्ने बुझेकी छेस् ? तँ त मेरा लागि तेरा बाउआमाले दान दिएकी मान्छे मात्र होस् । दानमा पाएको कुरो त्यत्ति अमूल्य र अनमोल हुन्न । के घुर्की लगाउँछेस् ?
लक्ष्मी:- (क्रोधी अवस्थामा नै रहेर) ए तिमी रातभरि अलप भएर बिहानभरि बरालिएर रहँदा उत्पात भएन ? मैले सुसेधन्दामा अलमलिएर यो चार दिवालभित्र नै थुनिएर बस्दा पनि उत्पात भयो । बदलिँदो समयअनुरूप चलौँभन्दा घोर आपत्ति भो ? तिम्रो यही स्वभावले त म जलिरहेकी छु, गलिरहेकी छु र पाकिरहेकी छु । तिमी अहङ्कारी पुरुषको पैतालाको धूलो बनी जीवन गुजारा गरिरहेकी छु । हेर, अब तिम्रो धम्कीले डराउने जमाना गए । तिम्रो अभावमा मेरा हातगोडा कुँजा हुन्छन् भनेको होला । बरु तिमी पो भ्रममा छौ । यस्तो कदापि नसोच । मेरो साथमा मेरो छोरो छ, छोरो । मसँग के छैन र म तिमीलाई बाउआमाले दिएको दान भइरहने ? अब यस कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ । के मलाई तिमीले कोठामा सजाएर राखेका छौ ? दिनभर काम गर्नैपर्छ । काम गरेपछि माम जहाँ पनि पाइन्छ । (छोरातर्फ नजर लगाउँदै) म यसकी आमा हुँ । मेरो थर यसले पाउनुपर्छ । यस बारेमा मैले तिमीलाई पटकपटक भनिसकेकी छु । आज त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ ।
नरनाथ:- (र्झकंदै) बडो बहस गर्छेस् । तैँल्ो त तेरो बाउको थर पाउँदिनस् भने तैँले जन्माएको यो छोराले कसरी तेरो बाउको थर पाउँछ ? तँलाई तेरो बाउको वंश चलाउने इच्छा रहेछ । तेरो त्यो चाहना पूरा गर्ने ठेक्का मैले लिएको छैन । जा, पहिले तेरो बाउसँग बहस गर अनि मात्र मकहाँ बहस गर्न आइज । अर्को कुरा कान खोलेर सुन- यस घरको र तेरो मालिक म हुँ म । तँ त खोजेर ल्याएकी न होस् । मुखमा ताल्चा लगाएर बस्, बस्नु नै छ भने । हैन यसो गर्न सक्दिनस् भने तँ आफ्नो बाटो आफैँ बना । मनपरी भन्ने र मनपरी गर्ने नै हो भने तेरो आकाश खुल्ला छ । म तेरो आकाशलाई बादल बनेर छेक्दिन । मैले तेरो लागि गर्नसक्ने यत्ति नै हो ।
लक्ष्मी:- (च्याठ्ठिँदै) भो, तिमी नै बस, यस घरमा, नारीलाई पाल्तु कुकुर सम्झने यस मसानघाटमा । जहाँ नारीको नामै रहँदैन त्यहाँ मैले कसरी बस्ने ? (जोसिँदै) म तिम्रो गुलाम हुँ र ? के म तिम्रो खेलौना हुँ ? खेलाउन मन लागुञ्जेल खेलायौ खेलाउन मन नलागेपछि तिरस्कारको चरमोत्कर्षमा पुग्यौ हैन ? मैले तिम्रो के खाएकी छु र ? यहाँ तिमीले मलाई के दिएका छौ ? (रिसको उत्कर्षमा पुग्दै) एक चिम्टी सिन्दूर र एक लुङ पोते दिएँ भन्दैमा मलाई जता मन लाग्यो उत्तै फर्काउँछौ ? तिमीले जति सताए पनि म सहेर बसुँ ? अहँ, अबदेखि मबाट त्यस्तो काम हुन्न । म न तिम्रो मनोरञ्जनको साधन हुँ न सन्तान जन्माउने मेसिन ।
नरनाथ:- होसमा आएर कुरा गर् । तँ पूरै स्वतन्त्र छु भन्ठान्ने नगर ।
लक्ष्मी:- म पुरापुरी होसमा छु । तिमी चाहिँ यस धर्तीमा स्वतन्त्र म चाहिँ परतन्त्र ? तिमीले फेर्ने श्वास र मैले फेर्ने श्वासमा के भिन्नता छ ? तिमीले खाने गाँसमा र मैले खाने गाँसमा के भिन्नता छ ? हेर, मात्र तिम्रो स्वार्थ पूरा गर्न म मेरो अन्तस्करणको आवाजलाई तिलाञ्जली दिन सक्दिन । (छोरातिर हेर्दै) यसलाई तिम्रो समाजले तिम्रो छोरो मान्छ तर यो मेरो हो । मुखले तेरो पनि हो भनेर हुँदैन । उधारो सम्झौता गर्ने र नारीलाई सङ्कुचित घेरामा दास बनाएर राख्ने दिन गए । यसको नामसँग तिम्रो मात्र हैन मेरो पनि नाम गाँसिनुपर्छ । एक जिम्मेवार आमा भएर मैले यत्ति चाहेँ त के बिराएँ ? (एकक्षण सन्नाटा छाउँछ ।) तिमीले कुरो बुझ्यौ ? यसको नामसँग तिम्रो मात्र हैन मेरो पनि नाम गाँसिनुपर्छ । यतिखेर एक आमा बोलिरहेकी छे । प्रसवपीडाले आक्रान्त भएकी आमा वात्सल्यप्रेमको साँचो मूल्य खोजिरहेकी छे ।
नरनाथ:- समाजमा नभा'को कुरो नगर है ।
लक्ष्मी:- ए तिमीलाई मेरो नाम, मेरो हक दिन डर लाग्यो हैन ? विवाह बन्धनमा बाँध्ने तिम्रो समाजलाई भन्न सक्दैनौ ? म मेसिन हैन, मान्छे हुँ मान्छे । मान्छेले मान्छेको हक खोज्छ । चाहे त्यो पतिले हरण गरेको होस् या अरूहरूले । (अलिक सहज भएर) हेर, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउन साहसले पुगेन भने दुस्साहसको पनि खाँचो पर्छ । मलाई तिम्रै पत्नीको रूपमा हेर्न चाहन्छौ भने यस पुरातनवादी समाजले धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा अनि परम्पराको नाममा लादेको यो नियम बाहिर आऊ । बाटाका हरेक तगाराहरू तोड्दै र फोड्दै आऊ । म तिम्रै साथमा रहनेछु । यस समाजले हाम्रासामु घुँडा टेक्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र यो एक्काइसौँ शताब्दीको समाज कहलिन्छ ।
नरनाथ:- (शिर निहुर्‍याउँदै र घोरिँदै) हेर्, यो समाज मलाई पनि चाहिन्छ, तँलाई पनि चाहिन्छ ।
लक्ष्मी:- चाहिन्छ, चाहिन्छ सबथोक चाहिन्छ । मलाई तिमी चाहिन्छौ, तिमीलाई म चाहिन्छु । यो मलाई पनि थाहा छ । भन, तिमी यस नारीको श्रीमान् बन्न रुचाउँछौ या रुचाउँदैनौ ? तिमीलाई पनि थाहै होला । विज्ञान भन्छ- यो सन्तानको प्रत्येक अङ्गप्रत्यङ्ग मेरो रगतले बनेको छ । मेरो प्रसवपीडाले त भनिरहेछ- मेरो देन कैयौँ गुण ठूलो छ । तिम्रो देन त बालुवाको कणसरह छ । यो कुरा तिमीले कहिल्यै सम्झेका छौ ? विचार गर, अरू सोच । बच्चा जन्माउन लोग्ने नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । एकै क्षण लोग्नेमान्छे भइदिए काफी हुन्छ । तिमीलाई थाहा छ ? तिम्रो बाबु यही हो भनेर चिनाउने काम आमाले गर्छे, आमाले । त्यसैले आमा सन्तानको लागि सत्य पात्र हो । बाबु त आमाको विश्वास पात्र मात्र हो । त्यसैले तिमी राजी हुन्छौ त ठिक छ । समानताको अंशियारमा सहभागी बन । म लक्ष्मी रिजाल, तिमी नरनाथ आचार्य । आधा मेरो आधा तिम्रो थर मिलाऔँ । हाम्रो छोराको पूर्ण नाम भयो- पुष्पकमल रिचार्य ।
नरनाथ:- (छक्क पर्दै) लक्ष्मी, तैँले यो के भनेकी ? मलाई पनि बोल्न दे न । हाम्रो परम्परालाई नतोड् । तेरो प्रस्तावलाई मैले स्वीकारेँ भने यो समाजले तीखा भाला लिएर मलाई घेर्नेछ । त्यस बेला म के उत्तर दिऊँ ? तेरो यो गुलियो भाषणले उनीहरू टेर्नेवाला छैनन् ।
लक्ष्मी:- टेर्छन्, अवश्य टेर्छन् । हेर, यो समाज कुसंस्कारीको मात्र हैन । यो समाज अग्रगमन चाहने हरेक नर र नारीको पनि हो । नौलो कुरो सुरुमा अपाच्य हुन्छ । बिस्तारै पाच्य बन्दै जान्छ । यस कुराको उद्घाटन तिमी र मबाट गरौँ । सारा समाजको घोचो उठ्ला तर आफैँ लत्रेर पनि जान्छ किनभने यो समाजमा महिला अघि र पुरुष पछि हुनुपर्ने हो । महिलालाई चिनाउन पुरुष अनिवार्य छैन तर पुरुषलाई जन्माउन महिला अनिवार्य छे । (नरनाथको हात समाउँदै) आऊ, तिमी र म सँगसँगै नौलो धर्ती टेकौँ । हामीलाई साथ दिने धेरै छन्् । हुनु नै पर्छ । अब त होस्मा आऊ । आऊ छोराको हात समाऊ । यो आधा तिम्रो : आधा मेरो हो । (दुवैले छोराको हात समाउँछन् र मुस्कुराउँदै कोठाभित्र छिर्छन् । पर्दा खस्छ ।)